10 Siyaabood Oo Lacag Lagu Siinayo Si Aad U Dhageysato Wicitaanada 2021
Bogga ugu weyn 7 Siyaabood Oo Lacag Lagu Siinayo Si Aad U Dhageysato Wicitaanada 2021
Sawirka Andrea Piacquadio ee Pexels.com
Weligaa ma ku fikirtay xaqiiqda ah inaad dhab ahaan awooddo lacag dhageysiga wicitaanada? Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa siyaabo aad lacag ku hesho si aad u dhageysato wicitaanada.
Shirkadaha badankoodu waxay u xilsaarmaan waajibaadka hubinta iyo dib -u -eegista wicitaannadooda wax -qabad tayo leh iyo shirkadaha maareynta kuwaas oo iyaguna raadinaya adeegyada shaqsiyaadka adiga oo kale ah si shaqada loo qabto.
Aniga ila joog markaan ku dhex socdo geedi socodka.
Lacag Ma La I siin Karaa Si Aan U Dhageysto Wicitaanada?
Haddii aad raadinayso hab aad ku kasbato xoogaa dakhli dheeraad ah dhinaca, waxaa jira aalado internet -ka ah oo lacag ku siiya inaad dhageysato wicitaannada. Tani waa wax mudan in laga sameeyo raaxada gurigaaga.
Haddii aad jeceshahay dhinaca kale, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad si taxaddar leh u dhageysato wicitaannada taleefanka. Wicitaannada taleefanku waxay u dhexeeyaan macaamiisha loo -shaqeeyahaaga iyo macaamiishooda. Dhamaadka wicitaan kasta, waxaad u baahan doontaa inaad dib u eegto oo aad ku qiimeyso heerar kala duwan.
Waan hubaa inaad la yaaban tahay haddii ay tahay wicitaan toos ah ama wicitaan duuban, sax? Waxaa xusid mudan, waa duubis sidaa darteed wax kasta oo aad dhagaysanayso waxay hore u dhici jireen waqti hore.
Weligaa ma maqashay duubista bilowga wicitaanada oo leh “wicitaankan waxaa loo duubi karaa hubinta tayada?” Ama dhegaystay tan bangiga ama shirkadaha caymiska oo leh “wicitaankan ma laga yaabaa in lala socdo?” Macnaha hadalkaas gaarka ahi waa in wicitaanka la duubay oo ay u badan tahay in dib -u -eegis iyo qiimayn lagu sameeyo. Shirkadaha dadka lacag siiya si ay u dhegeystaan ​​wicitaanada waxay sidaas u sameeyaan hubinta tayada.
Maxay Shirkaddu kuugu Bixinaysaa Dhageysiga Telefoonnada?
Dhageysiga wicitaanada waxay ka caawisaa ganacsiyada inay maamulaan wicitaanada taleefanka si ay uga caawiyaan suuqgeynta iyo iibinta. Waxa kale oo ay ka caawisaa shirkadaha inay fahmaan sida khadadka taleefankooda iyo tilmaamaynta suuqgeynta qadka tooska ah u saameeyaan suuqgeynta guud iyo guusha shirkadda.
Dib -u -eegaha wicitaanka, waajibkaagu wuxuu noqon doonaa; dib u fiiri wicitaannada macmiilka, bixi warbixinno gorfayn ah oo u soo bandhig shirkadda macmiilka xog qiimo leh oo gacan ka geysanaysa hagaajinta adeegga macaamiisha.
Sideen Lacag Bixiyaa Si Aan U Dhageysto Wicitaannada?
Si aad u bilowdo, waa inaad ku qortaa meheradaha la heli karo ee bixiya dib -u -eegayaasha si ay u dhagaystaan ​​wicitaannada. Dhamaadka wicitaan kasta, waxaa lagaa filayaa inaad dib u eegto oo aad qiimeyso sida su'aalaha soo wacayaasha looga jawaabay ama sida su'aalahooda loo maareeyay kadibna loo helo mushaarkaaga.
Qaybta ugu xiisaha badan ee shaqadani waa in ay u gudubto xamaasad dhinac ah. Yacni, waxaad ka samayn kartaa raaxada gurigaaga.
Hore u socoshada, waxaan qori doonnaa 7 dariiqo oo lacag lagu siiyo.
Siyaabaha Loo Bixiyo Si Aad U Dhagaysato Wicitaanada
Waxaa jira tiro aad u tiro yar oo aalado lacag siiya dadka isticmaala si ay u dhagaystaan ​​wicitaanada. Si aan u bilowno, waxaan leenahay:
Humanatic waa software siiya shirkadaha si qoto dheer u falanqeeya wicitaanada taleefankooda. Halkii laga isticmaali lahaa kombiyuutarrada si loo qoro oo loo kala saaro wicitaannada taleefanka ee duuban, Humanatic waxay shaqaaleysiisaa dadka adduunka oo dhan sida adiga oo kale inay dib u eegaan wicitaannada guriga iyagoo dhegeysanaya wicitaannada duuban oo ay bixiyaan warbixinno loo adeegsan doono in lagu falanqeeyo wicitaannada macmiilka.
Si aad ugu bilowdo Humanatic, waa inaad haysataa koonto PayPal oo sax ah oo la xaqiijiyay. Xaqiijinta ayaa caddaynaysa in qofku yahay qofka ay yidhaahdaan.
Marka ugu horreysa ee aad bilowdo, waxaa lagu siin doonaa marin u helidda labada qaybood ee ugu fudud ee wicitaannada. Markaad hore u sii socoto, waxaad furi doontaa qaybo cusub oo bixin doona fursado badan oo lagu kasbado. Lacag -bixinta Humanatic waxaa la sameeyaa toddobaadle.
ARAG SIDOO KALE: 14 Shaqooyin Qoraal oo Si Wanaagsan u Bixi doona 2021
Reynolds iyo Reynolds waxay horumariyaan oo taageeraan software -ka tafaariiqlayaasha baabuurta. Waxay muujiyaan Nidaamka Maareynta Tafaariiqda oo kaliya ee warshadaha. Mashruucan wuxuu siinayaa ganacsatada ikhtiyaar u ah nidaamyada maareynta ganacsatada (DMS)-ERA-IGNITE ama AWOOD-oo ay weheliyaan aaladaha tafaariiqda ee loo dhisay inay wada shaqeeyaan si loo hagaajiyo howlaha baayacmushtarka iyo in la wanaajiyo qanacsanaanta macaamilka ee iibiyaha.
Adigoo ah Wakiilka Adeegga Wicitaanka ee fog ee Callbright Reynolds, waxaad mas'uul ka noqon doontaa inaad dhageysato wada sheekaysiga taleefanka ee duuban ee u dhexeeya macaamiisha iyo macaamiishooda iyo qiimeynta wicitaannadaas iyadoo lagu saleynayo shuruudaha horay loo dejiyey ee maaraynta wicitaanka iyo aqoonsashada fursadaha iibka ee seegay.
Si aad uga bilowdo Reynolds, waxaad u baahan tahay inaad dirto iimayl muujinaya rabitaankaaga shaqada. Intaas ka dib, waxaad heli doontaa arji aad buuxiso oo laga yaabee inaad sidoo kale qaadato imtixaannada qaarkood.
Callbright wuxuu bixiyaa laba-toddobaadle iyada oo si toos ah loogu shubo bangiyada. Heerka bilawga shaqada falanqeeyaha wicitaanku waa $ 11 saacaddii.
PointQA waxay bixisaa tayada xarunta xiriirka iyo adeegyada maareynta waxqabadka. Waxay qiimeeyaan oo ay falanqeeyaan isdhexgalka wakiilka-macmiilka si loo furo habdhaqanka muhiimka ah iyo darawalada habraaca iibka, haynta, iyo adeegga.
Si aad uga bilowdo PointQA, waxaad u baahan tahay inaad lahaato shahaadooyinka soo socda:
Khibrad xarunta wicitaanka 1 sano ama u dhiganta
Ugu yaraan ka qalin jabiyay dugsiga sare
Diyaar u ah ka shaqaynta jadwalka dabacsan (Ugu yaraan 40 saacadood toddobaadkii)
Iyada oo leh xirfado dhegeysi iyo falanqayn aan caadi ahayn
Dabacsan, faahfaahsan, oo awood u leh inuu si guul leh ula qabsado isbeddelka
Lacag -bixinta Barta QA waxaa la sameeyaa toddobaad kasta iyadoo lagu saleynayo arrimo gaar ah.
Guru waa goob madaxbanaan oo khubaro loo kiraysto si ay u qabtaan hal hawl ama mid kale. Markay tahay guru, waxaad iska qori kartaa sida madax -bannaan, u dejin kartaa astaantaada si aad ugu habboonaato heerarkaaga shaqsiyeed oo aad u fiirsato xirfadlayaasha codsada adeegyadaada.
OneSpace waxay raadineysaa codsadeyaal aqoon u leh jagooyinka soo socda. Haddii aadan arag meel ku habboon xirfaddaada, soo gudbi arjigaaga, waanan kula soo xiriiri doonaa haddii iyo marka fursad ku habboon la helo.
Sida Guru, OneSpace waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameysato astaan ​​si waafaqsan waxaad sameyn karto. Mid ka mid ah xirfadaha iibinta ugu sarreeya ee OneSpace ayaa ah dhageysiga wicitaannada la duubay iyo falanqaynta.
Amazon Mechanical Turk (MTurk) waa goob suuq -geyn dadweyne taas oo u sahlaysa shaqsiyaadka iyo ganacsiyada in ay hawshooda iyo shaqooyinkooda u dhiibaan shaqaale la qaybiyey oo hawlahan gabi ahaanba qaban kara. Tan waxaa ku jiri kara wax kasta oo ka socda samaynta ansaxinta xogta fudud iyo cilmi -baarista ilaa hawlo badan oo shaqsiyeed sida ka -qaybgalka sahanka, dhexdhexaadinta nuxurka, dhageysiga wicitaannada, iyo inbadan.
Ganacsiyada ama horumariyayaashu waxay isticmaali karaan MTurk si ay u helaan kumanaan shaqaale ah oo dalab u baahan-ka dibna si toos ah isugu daraan natiijooyinka shaqadaas geedi socodkooda ganacsi iyo nidaamyadooda. Tusaalooyinka caadiga ah waxaa ka mid ah dhex -dhexaadinta mareegaha iyo waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshada, kala -soocidda badeecadaha ama sawirrada, iyo ururinta xogta laga helo mareegaha ama ilo kale.
Ilaha Wicitaanku waa madal onlayn ah oo siisa marin u helka shaqsiyaadka ka caawiya shirkadaha inay qiimeeyaan, tababaraan, oo hagaajiyaan waxqabadkooda iyagoo adeegsanaya wicitaanada la duubay.
Maareynta wicitaanada taleefanka ee meheraddaada si ay uga caawiso suuqgeynta iyo iibinta waxay ka caawisaa shirkadaha inay fahmaan sida khadadka taleefankooda iyo tilmaamidda suuqgeynta qadka tooska ah u saameeyaan suuqgeynta guud iyo guusha shirkadda.
Goobta Wicitaanka, waxaa xoogga la saaraa bixinta nidaamka wax-qabadka ganacsi ee farsamada karti u leh si loo wanaajiyo dakhliga macaamiisha, faa'iidada, iyo sumcadda sumcadda.
CallSource waxay bixisaa xirmo mushahar iyo xirmooyin faa'iidooyin ah.
Waa Maxay Shuruudaha Dib -u -eegaha Wicitaanka Telefoonku?
Si aad ugu fiicnaato shaqada, waxaad u baahan tahay inaad ku fiicnaato dhegeysiga iyo fahamka Ingiriiska ee lahjadaha/lahjadaha kala duwan. Waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku fiicnaato isgaarsiinta maadaama shaqadu u baahan tahay inaad si dhow ula shaqayso dadka kale.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad yeelato jadwal dabacsan oo fududeynaya inaad guriga ka shaqeyso sidii markii loo baahdo.
Ugu dambayn, si aad u noqoto dhegeyste wicitaan wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad lahaato xirfad dib -u -eegis iyo falanqayn wanaagsan. Xirfaddan gaarka ahi waa ta kaa dhigaysa mid aad u fiican.
Waa inaad sidoo kale ka fikirtaa cillado kasta oo suurtogal ah. Samee baaritaankaaga oo raadi shirkad kugu habboon.
Si hore loogu socdo ganacsi ahaan ama shirkad ahaan, waxaa loo baahan yahay in lala socdo, la xisaabtamo oo dib loo eego xog kasta oo soo gasha. Iyada oo la heli karo shirkado hanti dhawr ah, shirkaduhu hadda waxay awoodaan in la dhageysto wicitaanadooda oo dib loo eego. Bilowga, waxaad u baahan doontaa laptop shaqaynaya, barta internetka wanaagsan, iyo dhegeysiga shaqada.
athomegrind.com - Ku kasbasho $ 11 Saacaddii Dib -u -eegista Wicitaannada Telefoonka Guriga
pinoymoneyonline.com - 3 Shabakadaha Internetka oo Lacag ku siiya inaad dib u eegto Wicitaanada
Sida Loo Sameeyo Lacag Online Ah Iyadoo Aan Waxba Bixin 2021
25 Xirfado Sharci ah oo Guriga Lacag Ka Helaya 2021
21+ Siyaabaha lacag looga helo Toronto 2021 | Lama furin